Zvinonzwa sekunge zvave makore kubva isu tange tine AMD CPU iripo pakuongorora, nekuti iine! Chikamu chekupedzisira chatakaona yaive APU kumashure mu2014. Kubva makore iwayo apfuura, AMD yakabuda neyakagadzirwa nyowani, yaenda kune 14 nm maitiro, yabvisa iyo "ma module" atakambojaira, uye tiri kuzvirumbidza chega-chakaziviswa 52% IPC kuwana pamusoro pevaimboita CPU. Desktop processors ikozvino inotangira pamakitsi mana isina SMT (Simultaneous Multi-Threading) nzira yese kusvika pamasere cores ane SMT. Ma processor ese ane TDP yakanyanya kuderedzwa neiyo yepamusoro SKU inouya mu95 W (mana chete watts akakwira kupfuura iyo i7-7700K. Uku kugadziridzwa kukuru kana tichienzanisa ne220 W iyo yepamusoro yeVishera CPU yakadhonzwa uye 125 W yeFX-8350.
Nhasi, zvakananga, tichave tichitaura pamusoro peiyo Ryzen 7 nheyo, mureza 1800X CPU mumutsara. Kuvandudzwa kweIPC kwakakura pamusoro peKufutisa, kuwanda kweshinda kukwira (zvinoenderana nemataurire aunoita modules iyo yekumberi kuverenga kuri kumusoro zvakare), uye ndinoziva isu tese vanofarira vanofara kuona mutsvaidzi mutsva anga achiuya. Zvikanzi, zvakaringana kubva kwandiri, ngatiende kune chip.
Ukatarisa pane tafura yakatsanangurwa pazasi, iyo 1800X iri, sezvakataurwa, iyo octo-musimboti ine SMT yegumi nematanhatu tambo. Iyi yakazara kati / yeti tambo kuverenga kubva mukushandiswa kwemaviri eCPU Complexes (CCX), zvimwe pane izvo gare gare. Iyo wachi yekutanga inouya mu3.6 GHz uye inowedzera maviri maviri (tambo ina) ku4.0 GHz. Iko kusanganiswa kweiyo XFR (Xtended Frequency Range) tekinoroji inobvumira imwe 100 MHz pamusoro pezvose zviri zviviri uye kuwedzera bovha wachi, kana tembiricha ichibvumira. Iyo CPU yemitambo mhando mutsva 14 nm FinFET maitiro. TDP (Thermal Design Power) iri pasi kusvika ku95 W, ingori 43% yeTDP kubva kuFX-9590, uye chete 76% yeTDP yeFX-8350. Iyo inotonhora yepakati pakati peiyo inofa uye IHS inotengeswa, panzvimbo yekupisa kupisa seIntel yakashandisa pane yavo Mainstream CPU.
Nezve PCI Express (PCIe) rutsigiro, Ryzen inopa huwandu hwenzira dze24 kunze kweCPU ichibvumira kushandurwa kwakanaka kwemakadhi mazhinji, PCIe based NVMe SSDs, uye mimwe michina yePCIe based. Makumi nematanhatu emaraini akatsaurirwa kumifananidzo, ina dzakatsaurirwa kune iyo yekubva M.2 PCIe NVMe slot, uye mana ekupedzisira akabatana ne chipset. Akasiyana ma chipsets anozopa yavo yekuwedzera PCIe nzira kune kunyange zvakanyanya dhisiki yekubatanidza.
AMD Ryzen 7 1800 Nongedzo
Base Clock Dhigiri 3.6 GHz
Tafura iri pazasi ndeye rondedzero yeiyo Ryzen mutserendende. Mariri tinoona iyo Ryzen 7 1800X ndiyo iri pamusoro soro yayo misere, tambo gumi nematanhatu, dhizaini inoteverwa nemakumi emamwe emamwe maSKU. Chero CPU yega pane ino rondedzero inokurumidza, uchifungidzira kuti unotenga mamaboard ne chipset inokwanisa kuzviita. Ma SKU chete ane X pakupedzisira ane iyo itsva XFR (eXtended Frequency Range) tekinoroji, cherechedza. Maererano ne AMD, iyo X SKU processors inogadzirwa uye inogadzirwa kuti ive nani overulsers.
Chii chinonyanya kubata ziso rangu pano AMD iri kukwanisa kuburitsa masere seyakadzika, gumi nematanhatu tambo, CPU ine TDP ye65 W. Izvo zvachose hazvinzwe. Zvese zvirimo zveIntel's Broadwell-E lineup (isina-Xeon) ine anopfuura mana cores uye tambo sere inovakwa pane 140 W TDP base.
Ryzen 7 1800X 8 / 16 3.6 GHz 4.0 GHz 16 MB Aihwa Ehe 95W-SR3 +
Ryzen 7 1700X 8 / 16 3.4 GHz 3.8 GHz 16 MB Aihwa Ehe 95W-SR3 +
Ryzen 7 1700 8 / 16 3.0 GHz 3.7 GHz 16 MB Wraith Spire Aihwa 65W
Ryzen 5 1600X 6 / 12 3.6 GHz 4.0 GHz Wraith Spire Ehe 95W
Ryzen 5 1500X 4 / 8 3.5 GHz 3.7 GHz Wraith Spire Ehe 65W
52% kuwedzera muIPC
AMD yakatarwa nechinangwa chekuwedzera IPC pamusoro peCPU yavo yapfuura ne40%, uye ivo vakabudirira. Ivo vakawana kuwedzera kweIPC, kune retail silicon, iri chaizvo 52% yakakwira kupfuura Excavator!
Pasi rese pasherufu kuwanikwa uye kukwikwidza mitengo
Mhando dzekuvhurwa dzinosanganisira matatu akasiyana 8-musimboti samples; 1700, 1700X, uye 1800X. Iyi mhando inouya mune MSRP ye $ 329, $ 399, uye $ 499 zvichiteerana uye ichave iripo pasi rese pa3 / 2 / 2017.
Kutanga uye pamberi pezvese, zvakakosha kuti unzwisise kuti yega yega AMD Ryzen processor ine yakagoverwa "smart gidhi" yeaive yakabatana sensors iyo iri chaiyo kune 1 mA, 1 mV, 1 mW, uye 1 ° C ine chiyero chekuvhota che 1000 / sec. Aya ma sensors anogadzira akakosha telemetry dhata inodyira muInfinity Fabric control loop, uye yekudzora loop inopihwa simba yekuita chaiyo nguva kugadzirisa kune AMD Ryzen processor maitiro anoenderana neazvino uye anotarisirwa mamiriro epamberi.
Uchishandisa yazvino / kupisa / kuregedza data kubva kuInfinity Fabric, Precision Boost modulates iyo AMD Ryzen processor's wachispeeds mune chaiyo nhanho 25 MHz. Iyo granular wachi yakatarwa inopa inopa AMD Ryzen processors yakakura yekushanda rusununguko kuprinta musimboti padhuze padhuze neakanakisa frequency chinangwa, uye inobvumidza yakanyorovera kusvika pakanaka chaipo. Vashandisi vanofanirwa kutarisira kuti wachi ichafungidzirwa kurangarira yeGPU, pane kutenderera, uye hunhu uhwu hunobatsira mukuvandudza nguva yakatarwa nguva zhinji.
XFR (yakasimudzwa Frequency Range)
Mubairo vashandisi vanovaka kana kutenga AMD Ryzen maitiro-akavakirwa masystem ane kutonhora kukuru. Inowanikwa pane yakasarudzwa AMD Ryzen processor modhi ine -X kukwana, XFR inosimudza iyo yakakwana Precision Boost frequency, kupfuura yakajairwa miganhu, pamberi pePrimum system uye processor kutonhora. Izvi zvinowanikwa nekuverenga uye kufungidzira AMD Ryzen processor kureba kusvika pakabatana thermal miganhu, wozoshandura iripo headroom kuti iwedzere kuwanda.
Padivi rekushanda, iyo Zen micro-aratidziro inomiririra huwandu hwekusimuka mumashure ekugona kupesana ne AMD yekutanga desktop zvigadzirwa. Nekudaro, iyo Zen yekuvakwa inoratidza 1.75x yakakura yekuraira scheduler windows uye 1.5x yakakura nyaya upamhi uye zviwanikwa; Shanduko iyi inobvumidza "Zen" kuronga nekutumira rimwe basa muzvikamu zvekuurayiwa. Kupfuurirazve, iyo micro-op cache inobvumira "Zen" kupfuudza L2 uye L3 cache painenge ichishandisa kazhinji-inowanikwa mashoma mashoma michero. Zen inowanikwawo neural network-yakavakirwa bazi rekufungidzira unit iyo inobvumira iyo "Zen" yekuvakwa kuti ive nehungwaru nezve kugadzirira yakakwana mirayiridzo uye nzira yebasa ramangwana. Chekupedzisira, zvigadzirwa zvakavakirwa pa "Zen" zvivakwa zvinogona kusarudza kushandisa SMT kuwedzera kushandiswa kwepombi yekuzadza pombi yekuzadza mapombi emapombi nebasa rakashomeka.
Zviri munharaunda iyi, kunyanya, kuti simba rekutonga huchenjeri hwe AMD's APU zvikwata kupenya kuburikidza kuendesa mu "Zen" kugona kukwirira kubva pasi-wattage mbozhanhare kuenda kune HEDT kurongwa.
Scalability mu "Zen" yekuvakisa inotanga neCPU Complex (CCX), inozvarwa ina hunyambiri misere miseru. CCX yega yega ine 64 KB L1 I-Cache, 64 KB L1 D-Cache, 512 KB yakatsaurirwa L2 cache pane musimboti, uye 8 MB L3 cache yakagovaniswa pamamwe cores. Imwe neimwe yakakosha mukati meCCX inogona kusarudza nestock SMT yekuwedzera yakakwenenzverwa-yakawanda tambo.
Anopfuura imwe CCX inogona kuve iripo mu "Zen" -based chigadzirwa, mune AMD Ryzen processor inoratidzira maviri CCXes anosanganisira masere cores uye 16 tambo (yakazara). Cores yemunhu mukati meCCX inogona kuve yakaremara ne AMD, uye CCXes vanotaurirana vachipfuura iyo yepamusoro-yekumhanya Infinity Fabric. Iyi modular dhizaini inobvumira AMD kuyera pakati, tambo, uye cache huwandu sezviri kudikanwa kutaridzira kuzere kuwonekera kwemutengi, server, uye HPC misika.
Iyo Infinity Fabric, parizvino, inoshanduka uye inowirirana interface / bhazi inobvumira AMD nekukurumidza uye zvinobudirira kubatanidza yakasarudzika IP portfolio mune inobatana kufa. Izvi zvakaunganidzwa zvidimbu zvinogona kushandisa iyo Infinity Fabric kuchinjanisa data pakati CCXes, system memory, uye vamwe vatongi (semuenzaniso memory, I / O, PCIe) iripo pane AMD Ryzen SoC dhizaini. Iyo Infinity Fabric inopawo "Zen" yekugadzira yakasimba yekuraira uye masimba ekugadzirisa, kumisa yakajeka mhinduro loop iyo inobvumira kune chaiyo-nguva yekufungidzira uye kugadzirisa kune wepakati voltage, tembiricha, socket simba dhizaini, wachispeed, nezvimwe. Uyu wekuraira uye kudzora kushanda kunobetsera AMD SenseMI tekinoroji.
Heano skrini inotaridza iyo dzakasiyana dzese chipset inowanikwa yeiyo AM4 papuratifomu, ane iwo akasiyana mazinga ekutsigira chishandiso. Sezvambotaurwa, kune x4 PCIe nzira kubva kuCPU yakatsaurirwa iyo chipset. Iyi tambo dzinoshandiswa sekuratidzwa pazasi, yeyese chipset chakasiyana. Pane iyo X300 uye A / B300 chipsets, iyo x4 PCIe nzira dzakatsaurirwa chipset dzakasununguka kushandiswa nevanogadzira mamaboard. Kana iwe uri kuronga kuwedzeredza, ndapota iva nechokwadi chekuti iro bhodhi raamai raunosarudza riine X370, B350, kana X300 chipset.
Yakavakwa muiyo AMD Ryzen CPU yakawanda basa, nekuda kweiyo soC dhizaini. Aya maficha anowanikwa zvisinei neicho chipset chiri mukushandisa.
Pazasi pane mufananidzo weiyo itsva Ryzen 7 redunhu mepu, izvi pakarepo, zvakasiyana zvakanyanya kubva chero chinhu muFX mutserendende. Iwe unogona kunyatsoona maCCX maviri ari kushandiswa pano, pamwe neiyo yega yegumi cores mune imwe neimwe CCX.
Heino mufananidzo weFX-8350 CPU mepu yekuenzanisa. Cherekedza kuti ine ma module mana akasiyana sei, ayo akashanda semaviri cores, panzvimbo yemasere akazvitsaurira?
Iyo X300 ndeimwe-ye-mhando mune indasitiri yePC, sezvo ichive chiri chinangwa-chakavakirwa ne AMD kurima ITX mhinduro dze AMD Ryzen mhuri yea processors. X300 inozadzisa izvi nekugonesa izvo zveSEC hunhu hwe AMD Ryzen processor, inopa yakakwana yakabatanidzwa I / O yekugonesa zvizere kumashure uye sarudzo dzekubatanidza kweye premium ITX mama. Saizvozvo, iyo X300 haina I / O mashandiro ayo, uye iripo panzvimbo yekugonesa kushanda kwasara kwe chipset: yakachengeteka bhutsu, yakavimbika platform module (TPM), uye humwe hutano hwakanangana nekuchengetedza. Aya machipu ekuchengetedza macomputer anokwana kuita chip muhukuru hwechipunwe pamunwe wepinky yemunhu.
Uku kuderedzwa kukura uye kusiri-ini / I kugona kweiyo X300 chipset mvumo mamaboard kugadzira kubatanidza iyi yakasarudzika chipset kune AMD Ryzen processor ine yakatsaurirwa SPI kubatanidza, pane iyo PCIe x4 chinongedzo chinodiwa kune I / O chipsets. Iyi yekuzvitsaurira iyi inovhura imwe yakawedzera PCI Express Gen 3 nzira mukati me AMD Ryzen processor yekushandiswa kwakawanda, kusanganisira yekuwedzera NVMe zvishandiso, GigE, WLAN, kana humwe hunhu-hwehupenyu hupenyu makadhi uye controllers zvakajairwa neiyo ITX fomu chinhu.
Nekuda kwekureruka kweiyo X300 chipset, ine inoshamisa simba rakaderera dhiraivha yeiyo chete 1 W. Izvi zvinowedzera kubatsira mamagadziri emabhodhi mukugadzira ITX mamaibhodhi e AMD Ryzen mhuri yea processor.
Pazasi pane mimwe mifananidzo kubva AMD yechigadzirwa chigadzirwa cheiyo mitsva yeRyzen CPU. Mamwe maSKU anosanganisira heatsink. Ndeipi muenzaniso weheatsink zvinoenderana neiyo CPU yauri kutarisa.
Bhokisi Rekutengesa CPU Holder
Inotevera mifananidzo yemhando ye1800X sampuli yatinayo. Kune zvakare mifananidzo yaro iri pedyo ne AM3-based Athlon II 240 processor. Quite zvishoma misiyano pakati pe AMD yekutanga AM3 package uye ikozvino AM4 package, kana iwe uchinge wasvika kumashure. Kubva kumberi ivo vanenge vakafanana. Iwe unogona kuona kune akawanda akawanda mapini (nerubatsiro rwekuva SoC) kuseri kweCPU, ndicho chikonzero iyo heatsink inokwira tsoka yekugadzika yakachinjirwa AM4.
AMD Ryzen uye AM3 CPU - Mberi AMD Ryzen uye AM3 CPU - Kudzoka
AMD Ryzen uye AM3 CPU - Kurema
Iyo data yatakaunganidza inotipa pfungwa yakanakisa yekuita kwayo ese ari maviri mumatura (hapana turbo), uye inofananidza nguva dzekuwongorora kuona IPC kuita mutsauko pakati pavo vese. Ini ndakasanganisira yeKaby Lake mhinduro ne i7-7700K, iyo hex yakakosha HyperThreaded Haswell-E i7-5820K, misere masere musere gumi neshanu Haswell-E i7-5960X, uye yekutanga SKU Broadwell-E i7-6950X.
ndangariro Corsair Vengeance LPX 2 × 8 GB DDR4-3000 15-17-17-35 Kingston Hyper X 4 × 4 GB DDR4-3000 MHz 15-15-15-35 G.SKILL Ripjaws4 4 × 4 GB DDR4-3000 15-15-15-35 G.SKILL Trident Z 4 × 8 GB DDR4-3200 14-16-16-35
Magetsi EVGA SuperNova G2 850 W EVGA SuperNova G2 750 W Superflower Leadex 1 kW Seasonic Platinum-1000
kutonhora CoolerMaster Glacer 240L Custom Loop ne EK LTX CPU Block uye 5.120 Radiator Hyper 212 Evo Custom Loop ne EK LTX CPU Block uye 5.120 Radiator
Muhomwe yekutarisira kubva ku AMD, tinowana zvikamu kubva GIGABYTE, Corsair, uye Noctua wongororo yeRyzen. Iyo bhodhi rekununurwa raive GIGABYTE AX370-GAMING 5, parizvino chikamu chavo chepamusoro che AM4 chigadzirwa. Semhinduro ye RAM, iro bhajeti kubva kuCorsair rinosanganisira maviri Kutsiva LPX DIMMs, iyi 2 × 8 GB kit yakateerwa DDR4-3000 ku15-17-17-35. Kutsva kubva pamutsetse neiyi nyowani yekugadzirisa mhinduro ye AM4 ndiyo NH-U12S kubva kuNoctua seye kutonhorera mhinduro (zvinongedzo pano uye pano kuna Noctua's AM4 inokwirisa makiti). Ive neshuwa yekutarisa zvinongedzo zviri pamusoro kuti uone nezvezvinhu izvo zvigadzirwa uye nemafambiro azvakaita kana isu takasundira pazvinhu zvishoma. Tine mamwe mapikicha pazasi pezvigadzirwa zvakapihwa.
Iyo AX370-GAMING 5. Pazasi tinoona dema / chena / grey color scheme mamaboard ine akawanda maitiro. Tarira, ndine iyo Noctua inokwira chigadziriso pane amai bhodhi nechekare. Tichitarisa kumashure kweGAMING 5 tinoona ese heatsinks akabatanidzwa ne screws. Iyo yekutanga PCIe 3.0 x16 slot inotengeswa yakazara, yechipiri inotengeswa kuX8, uye yechitatu kuX4. Isu tinogonawo kuona chikamu gumi (6 + 4), yakazara digital VRM, izvi zvinofanirwa kuve zvakawanda kune vese asi iyo yakakwira yeanopfuura. Kune akatiwandei emahara emunhu anofarira pano anosanganisira, asi asina kuganhurirwa, paneboardboard / reset mabhatani, diagnostic maLED, uye debug kuratidza. Iwe une masere PWM fan plugins pano, maviri ayo akaiswa ku24 W uye matanhatu pa12 W.
Heano mashoma ekuswededza kumusoro shangu yeGAMING 5, tisati tapfuurira kune kumwe kuedza. Ndicharega iwo mifananidzo vataure pachavo, asi ziva kuti kune zvese zvekubatanidza zvaunogona kuda pane ino bhodhi. Kune M.2, U.2, USB 3.0, USB 2.0, TPM, odhiyo, uye zvakawanda zvimwe.
Zviratidzo zvose zvaiitwa nebhobhobhoyo yakagadzirirwa kugadziridzwa kusinganisirwa (kunze kwezvimwe zvirongwa zvekuyeuka zvaifanira kugadzirirwa nemaune). Apo "chikwata" chinotaurwa pamwe chete neawa, inodaro kwete ratidza wachi inowedzera Ndakaedza nenzira iyi sekuti zvinoita sekuti mamaboardards akasiyana mumashandiro avo kunze kwebhokisi. Izvi zvinotora chero misiyano mumashandisiro anoita AMD / Intel mashandisiro avo ezvitambi uye mabatuni mamaibate turbo, saka izvi zvakanyanya "mhanyisa izvo zvawakapwanya" mhando yekuedza kumhanya kwemastock. Kumhanyisa kwendangariro kwakamiswa paDDR4-3000 15-15-15-35 yekuyedza kwese, zvisinei ne kit yakatsanangurwa. Izvo chete zvinosarudzika pane izvi AMD system iri kumhanya kuDDR4-2933 15-15-15-35, izvi zvinokonzeresa nemarongerwo akaitwa magariro
Tisati tapinda muaya manhamba nemagirafu, ini ndakaona mhinduro dzeAIDA64 dzese dzaive pamusoro pemepu. Takasvika kune vatinosangana navo maererano nezvawanikwa uye vakaziviswa kuti havana kukwanisa kutora pre-kuburitsa Ryzen sampuli. Nekuda kweizvi, ndakagamuchira yambiro mune mimwe miedzo nezve CPU isiri kutsigirwa. Izvi zvakakonzera mimwe mhedzisiro yemhedzisiro iyo isiri chaiyo. Saka nekudaro, hatisi kuzobatanidza izvi zvabuda kusvika mangwana anotevera. Ini ndichavawedzera uye ndogadziridza tambo yekukurukura yekudzokorora iyi kana yave kuwanikwa.
Tevere isu tichaenderera kune chimwe chinhu chinotonyanya kuoneka / kugadzirwa kunoenderana nekumanikidza, kupa, uye encoding mabhenji. Pano isu tinogona kuona izvo izvo zvakawedzerwa cores zvinogona chaizvo kuitira chero munhu anozoshandisa ivo. Iwe urikutaura nezve $ 499 CPU ichipinda mu ballpark ye, uye kunyanyisa, kuita kweIntel's $ 1000 + CPUs.
Kuenderera mberi kubva kune ese akawanda akakwenenzverwa kunaka kumusoro, tinosvika kune vamwe vePi uye Prime nhamba yakavakirwa bvunzo. SuperPi uye WPrime, chaizvo. Kunyangwe AMD, iine Ryzen 7 1800X, isina kupenya senge iri pamusoro apa mukuyedza pano, yakabata pachayo. Chaizvoizvo zviri nani kupfuura chero chinhu chatakawana neVishera kana Excavator.
Ingori chiyeuchidzo, bvunzo dzese kubva panguva ino kuenda kumberi dzave neCPU dzese dziri kumhanya ku4GHz panzvimbo yeavo ekumhanya.
Nekuenda kwemitambo, takaedza zvese pa1080p uye 1440p gadziriso kuona kana tichigona kuona mutsauko pakati pawo. Mabheti angu haa, isu hatizoona mutsauko unowoneka muFPS. Uye iyo yekubheja yaive yakarurama, ese mana maCPU akaenzaniswa pazasi anoratidza zvinobudirira zvakaenzana pamutambo wega wega pagadziriso imwe neimwe yakaedzwa. Kune ivo ma gamers kunze uko, iwe zvechokwadi hauzobhoikana nekuita kweRyzen!
Kana iri yekugadzira bhenji, 3DMark Fire Strike Yakanyanya, misiyano midiki muKazhinji uye Graphics scores. Kwemhando yeFizikiki, zvakadaro, isu tinoona iyo 1800X ichibvisa iyo 7700K nenzvimbo dzinosvika zviuru zvisere uye kusvika pedyo ne6950X.
Chiziviso Pamusoro peCore Kuverenga uye Kutamba
Pakagara paine kupokana kwekuti "zvakanaka, iwe unongoda 4c8t zvakanyanya kutamba chero mutambo" asi chikamu chemitambo chiri kuchinja. Ndokumbira kuti uone chirevo chiri pasi apa kubva kuna Brad Wardell, CEO weStardock Entertainment neMitambo yeOxide.
Mitambo yeOxide inoshamisa nekufadzwa nezvatiri kuona kubva kuRyzen CPU. Tichishandisa yedu yeNitrous injini injini, tiri kushanda kuti tiwedzere mutambo uripo uye weremangwana remutambo mutambo kutora mukana wakazara weRyzen uye yayo 8-musimboti, 16-tambo dhizaini, uye mhedzisiro parizvino zvinoorora. Aya mahwindo haasati aripo eRyzen benchmarking. Nekudaro, tarisira kudzokororwa munguva pfupi iri kutevera kuita kwemitambo seMadota eSingularity paRyzen CPU, pamwe nekuburitswa kwedu kwemitambo yemangwana.
Creative Assembly, vanogadzira Hondo Yekupedzisira, vaburitsawo chirevo pamusoro peRyzen.
Creative Assembly yakazvipira kuongorora uye nekukwiridzira mitambo yayo pane iyo-nyowani Ryzen CPU. Kunyange kuedza kwazvino kwechitatu-kwetatu kusingaratidze izvi parizvino, chirongwa chedu chekubatanidza pamwe ne AMD chinoreva kuti isu tiri kutarisa sarudzo dzekutarisa mashandiro epamberi mune remangwana kuti ape zvirinani kuRyzen CPUs dzichienda kumberi.
Mumusoro wedu kusvika kumusoro mhinduro, takamhanya tese masystem ku4 GHz. Izvi zvinoratidza kusiyana kweIPC uye cores zvakananga. Rangarira kubva pakutanga nyaya neAIDA64, zvakare izvo mhinduro zvichawedzerwa kana zvawanikwa. Pakazara, isu tinoona zvakanaka kuyera kana uchikwira iyo CPU kumhanya. Ini chaizvo ndinofunga kufanofungidzira kushanda kweSenseMI iri kubatsira mune idzi bvunzo refu, chaizvo wPrime 1024M uye HWBot x265, unogona kuona kuti vanoita sevanoshanda zvakanyanya kupfuura mamwe mabhenji akafananidzwa.
Direct IPC Kuenzanisa
Nekuda kwekusiyana kweSMT neHT, ndakafunga kuti zvaive nani kumhanyisa zvese netambo imwe chete. Pano tinogona kunyatsoona IPC yeRyzen tichienzanisa nezvipiriso zveIntel. Nokutendeseka, izvi zvinokatyamadza kune mhando nyowani, isina kunyatsogadziriswa CPU.
Apa ini ndakakwanisa kuwedzera imwe-off mhedzisiro yeFX-9370 ku4.0 GHz, izvi zvinoratidza kuti zvinoshamisa sei AMD yauya neRyzen-based CPU.
SMT uye HT Kubudirira Kuenzanisa
Mushure mekutarisa iyo IPC graph kumusoro iwe unofanirwa kunge uchifunga kuti "AMD iri kuita sei zvakanaka pamabvunzo-mazhinji-kuongororwa kana Intel ichine IPC iri nani"? Zvakanaka, heino maitiro. Tekinoroji yavo yeSMT inoshanda se, kana inoshanda kupfuura, Intel's HT. Isu tinogona kuona zvakanyanya se16% musiyano mukushanda pano pane 6950X, zvakanyatsoitwa AMD!
SMT uye HT Kubudirira Girafu
Ini ndichatungamira uye ndotanga izvi nekutaura kuti mhinduro dzangu dzakatemerwa nemhepo inotonhorera mukushandisa. Kutonhora kwemvura kungadai kwakandiisa kure, hapana mubvunzo.
With that said, Ini ndakadzoreredza RAM neiyo trusty yangu 2 × 8 GB G.SKILL Trident Z DDR4-3866 18-19-19-39. Nekuda kwekugumira kweBIOS, ini ndaigona kungomhanya kusvika kuDDR4-3200 hazvo. Saka nekudaro, ndakaisawo nguva ku15-15-15-35 (CPUz inoramba ichiratidza CL se + 1 pamusoro peBIOS). Ipapo kuendesa kweCPU kwatanga, asi ini handina kunyanya kunyanyisa kupfuura iyo 4 GHz nhamba yakashandiswa pamusoro. Ini ndakakwanisa kuwana iyo system yekugadzikana kunze kwe4,025 MHz zvakadaro, iyo inenge iri 12% kuwedzera pamusoro peiyo stock base wachi.
Pazasi pane skrini inosanganisira mabhenji anotevera nepoorema yakawandisa ichiiswa. Izvi zvinosanganisira Cinebench R15, SuperPi 1M, wPrime 32M, uye HWBot x265.
Kuti ndienderere mberi pano, ndakamhanyirazve 3DMark Fire Strike Extreme zvakare panzvimbo idzi dzakakwiridzwa. Kuwana kwacho, kunyanya paiyo fizikiki, kwaive kushamisa kune shanduko nyoro mukumhanya. Izvo zvakaenda kubva ku20,287 pamusoro kuenda ku21,605 apa!
Iyo software yekuwedzera pamusoro pe AMD inonzi "Ryzen Master". Tichave tichiisa maoko pamusoro-pazvo muiri inouya inopfuura nzira yekushandisa. Kamwe chete panenge paine chinongedzo chayo pano.
Mune iyo girafu pazasi isu takaedza kushandisa simba kweiyo system kune mamwe mamiriro akati wandei kubva kune chisina basa, kusvika ku Prime 95 Diki FFT (ine FMA3 / AVX) kutamba Crysis 3. Iyo sisitimu, pamatanda, yaive ichidhonza yakakura ye203 W yeCPU chete yemamiriro ezvinhu. Iyo PSU iri mukushandisa iri kungangoita 90% inoshanda pazero remutero, zvichireva kuti system yacho pachayo yaive ichidhonza 182.7 W. Inoita senge kurudyi iko tarisiro kune kukwana vateveri pabenji rangu rekuyedza kubvunza nezve 50 W yesimba iri rekudonha kumhanya kukuru Deltas). Patinodonhedza kune static 4 GHz isu tinoona mashandisirwo emagetsi panguva yePrim95 Diki FFT kusvetuka na84 W kumadziro. Zvakare, simba risingabvumirwe rinogona kutaridzika kumusoro apa, asi zvakare rangarira vateveri pane ino system. Iyo yepamusoro sosi yemagetsi inotora kubva kumadziro yandakaverenga yaive 325 W ichitamba Crysis 3, ona kuti pakanga paine 250 W TDP GPU yaibatanidzwa apa. Kuwedzeredza kwe Crysis 3 chete kwakawedzera 21 W kudhirowa.
Zvinonyatsotaridzika sekuti AMD yakagadzirisa simba ravo rekukwevera zvinhu kubva kuFX yakateedzana processors, inotaridzika chaizvo kuona!
Tembiricha dzainyatso kudzora zvinoshamisa pamwe neinotonhorera yemhepo, ini hapana chandakaona. Tembiricha yakanyanya kupisa painenge iri 71 ° C, uye yakanyanyisa kupisa yaive 90 ° C. Izvi zviri zviviri zvakaitika panguva yePrim95 Diki FFT.
Ruzivo kubva ku AMD Nezve TDP uye Power Draw
Chikanganiso chakajairwa kukumbira unopisa watts (TDP) nemagetsi watts ("simba dhiza"). Ruzivo chairwo rwekuti TDP chii, uye maitiro ekuverenga, saka zvakakosha pakukora mhedzisiro maererano nemagetsi maitiro easicon kifaa.
Thermal Design Simba (TDP) inonyatso kuyerwa yeiyo ASIC yekupisa yemafuta, iyo inotsanangura inotonhorera mhinduro inofanirwa kuti iite ratment performance. Iyo TDP fomati yakananga:
tCase ° C: Huru yekudziya yeakafa / heatspreader jini kuti uwane kuita kwakashanda.
tAmbient ° C: Kupisa kwakanyanya paHSF fan inlet kuti uwane kuita kwakashanda.
HSF ϴca (° C / W): Iyo yakaderera ° C paWatt yeyese yeheatsink kuti iwane ratated performance.
Tichishandisa iyo yakasarudzika TDP formula, tinogona kunyorera 95 W AMD Ryzen 7 1800X:
tCase ° C: 60 ° C mwazvo tembiricha ye processor chivharo (kana IHS, yakabatanidzwa heatsink)
tAmbient ° C: tembiricha yakakwana yemakesi kuHSF inlet.
Ongorora: 0.189 ϴca ndiyo yeiyo AMD kuisirwa kutonhora kweropa mafuta kuti uite mwero weCCU performance. Iyo AMD Wraith Max inoenderana neiyi ratidziro, uye akawanda 3rd-party kutonhorera mhinduro anowanzo pfuura ichi chinodiwa neakakosha majini.
Kana iyo smart algorithms inotonga Precision Boost uye XFR ichiongisa mamiriro anodziya ari pasi pemagariro aya ("musoro"), AMD Ryzen processor inoshandura shanduko yakadaro kumusoro kuita basa rinonzwisisika kune mushandisi kusvikira mamiriro emuganho asangana.
Mune yakakura-yakawanda "ese cores inosimbisa" mamiriro, uyu mushandisi-anotarisa mashandiro ekugadzirisa anotendera AMD Ryzen 7 1800X processor kuti ramp yepamusoro pesimba isvike ku AMD Socket AM4 rejenari muganho we128 W. Thermal capacitance ("kupisa soro") ye processor kufa, heatspreader, HSF, uye junction mutengesi inobvumidza AMD Ryzen processor kuti igadzirise izvo tCase zvinorehwa nepamusoro pesimba rehutongi pamusoro penguva, zvichiita kuti CPU iwedzere kuwedzera kushanda ichangosara mukati meganhuriro yemafuta inotsanangurwa neTDP. Precision Boost uye / kana XFR ichakwira pa60 tCase ° C kana 128 W yemagetsi emagetsi (chero inouya kutanga).
Iyi nzwisiso mune chaiyo TDP kuverenga uye inopawo nzwisiso yekuti yakasimba sei aftermarket kutonhora mhinduro inogona kupa mimwe yekuita mikana yekuita AMD Ryzen processor. Akadzika mashoma ekushisa akapihwa neanofarira anotonhorera zvinobudirira kuderedza processor TDP, kuvhura yakawedzera inopisa mafuta headroom yePrecision Boost uye XFR.
Pakuvhura isu tatoona akati wandei mama akanaka pamusika, kusanganisira iyo GIGABYTE AX370-GAMING 5 inoshandiswa pano. Pamusoro pe80 mamaibodi ari kuwanikwa nhasi kwanhasi AM4 papuratifomu, usakanganwa izvi zvichabatsirawo Ryzen-based APU's! Kune vazhinji vagadziri anotonhorera (15 + panguva yekunyora) vane mhinduro dzinokwira dze AM4 papuratifomu. Kune avo vasingade kuvaka yavo sisitimu, pachave nepamusoro pe 200 systemolidator inovaka Ryzen-yakavakirwa makomputa kune vatengi vavo pakupera kweQ1 2017. Zvakare kuuya kumusoro munguva pfupi ichave mitambo yemitambo kubva kune ese ari pamusoro-tier OEM's (kureva ASUS, Dell / Alienware, nezvimwewo).
Ehe, wongororo iyi yakafukidza chete Ryzen 7, sezvo iri iyo iripo yekuburitsa. Mukoma mudiki, Ryzen 5, achange achiuya achitenderera muQ2 2017. Iyo APU's (idzi zvakare dzese dzichazovhurwa) uye nhare dzemahara dzinenge dzave kunze imwe nguva mukati me2017. Hapana rumwe ruzivo rwakaziviswa nezveizvi. Naples (server / workstation) zvishandiso zvichange zvichitangisa mukati meQ2 ye2017 zvakare.
Hazvina mhosva kuti unocheka sei uyu, AMD yakabuda nemukundi pano. Iko kune hukuru hukuru hweIPC, matanho makuru mune iyo SOC papuratifomu, uye kuwanda kwezvinhu zvitsva zvinoita kuti CPU ikurumidze kuitika pazvinogoneka. Haisi chete simba rekudonha pasi, riri zvakanyanya kurongeka pane neFX. Zvese izvi pamitengo isiri yekukwikwidza chete, zvinokanganisa chaizvo mukuenzanisa nemitengo yeIntel. Isu tinoona processor iyo inopinda muMSRP yeUS $ 499 yekutengesa inofuridza ine ma processor maviri neMMSRP zvakanaka mukuwedzera kwe $ 1000.
AMD Ryzen 7 1800X CPU Review inzvimbo kubva: Overclockers - The Performance Computing Community